Kusiyana Kwekunaka NeKondhomu Kana Kuti Musina. Kusiyana Kwekunaka NeKondhomu Kana Kuti Musina.
Kusiyana Kwekunaka NeKondhomu Kana Kuti Musina.
Pano toda kumbotsanangura siyano yekushandisa kondhomu kana kuisana musina kondhomu. Mazuvano kuhwisisa kuti kondhomu rinoshandiswa sei zvinokwanisa kukuuraya kana kukuraramisa.
Zvinokwanisa kuti uzokwanisa kuiva vana kana kuti ushaye vana. Pane zvigwere zvakawanda zvinodzivirigwa nokushandisa ma kondhomu. Zvimwe zvacho zvinonetsa kurapa zvakaita se
Koitazve vamwe vanobata chigwere chinokwanisa kurapika asi nengari yokuchinonokera zvonetsa kuchirapa. Kondhomu rinobatsira pakudzivirira zvigwere, uye mimba.
Pano hatisi kuda kuwanza nyaya yokuti sei uri kushandisa kondhomu. Tiri kufunga kuti unohwisisa kuti kondhomu basa raro nderei asi toda kubvunza kuti kunaka kwekuisana kwevanhu vari kushandisa kondhomu kwakasiyana here nevasina kondhomu?
Mubvunzo uyu haunetsi kudavira nokuti mhinduro yawo ndeyokuti zvakasiyana. Mubvunzo unotevera unoti zvakasiyanei. Tasvika ipapo zvoda kuti tichipatsanisa vakadzi nevarume. Varume ndichada kumbonobvunza saimba wangu kuti zvakasiyanei saka ndotanga nokutsanangura kusiyana kwazvo kumunhukadzi.
Chokutanga ndechokuti zvinoda maoko maviri kupfekedza murume kondhomu nokuda kwechihomwe chiri kumberi kwe kondhomu chinoda kusiiwa chisina mweya kuti kondhomu rusabvaruka murume paanotunda. Saka zviri nani chose kuti mukadzi apfekedze murume kondhomu Kuti zvidaro munoda kumbopanana zemo, kukisana, nosvetana, kupurudzirana, kukwenyererrana, kuzevezerana muzheve, etc. Kozoti muri pakati pakudaro mombomira motanga zve kondhomu.
Pamunozopedza zemo rati dzikirei. Mombowedzera futi. Hazvinakidzi. Chombo chisina kondhomu chinodziya kubata mumaoko kana chakamira. Chombo chine kondomu hachinatsi kubatika mumaoko. Chinenga che FAKE.
Kunakigwa pakuisana kune PSYCHOLOGY yako kwega. Umwe noumwe ane zvaanofunga pakuisana kusvika mapedza. Zvimwe zvacho zvinoita kuti kunaka kuwedzere, zvimwewo zvinoderedza. Saka iwe kana une kondhomu rako nemurume wako umwe noumwe ari kufunga zvake ipapo. Pano tiri kutaura kushandisa makondhomu mumba menyu kwete zvechihure zvine imwewo PSYCHOLOGY yazvo yakatosiyana. Murume nomukadzi mumba. Tabvumirana kuti ngatishandise Kondhomu. Chikonzero tese tinochiziva. Hapana kufungirana chihure, kana chigwere. Tiri tese panyaya. Tese tiri kuda kuisana.
Kana muchiisana pane nguva mbiri dzinoda kuti unatse kuhwa mumuviri wako. Nguva yokutanga ndeyemurume achipinza chombo. Unohwa achipinda chombo chake chichifasa, kuvura nokuzadza chitubu. Zvinotora nguva shomanana asi zvinonaka chose zvokuti pamwe achipinda unovhunduka muviri. Unomomira kufema kwekanguva kusvika ati godyo. Wega unongowanika watobatirira kana uri pamanhede. Maziso avara kuti unatse kuterera achipinda.
Heinoi siyano. Kana ane Kondhomu, unongohwa kuti chapinda asi hauhwi kuti chapinda sei. Kana asina kondhomu, unohwamusoro kupinda ugohwa ganda (wangu haana kuchekwa) richikokota madziro, ugohwa muviri wechombo kuti zvakatosiya mapindire azvo nemakweshere azvo mukati.
Ganda re kondhomu rakasiyana chose nerechombo. Chero iwe ukada kupomba chombo chine kondhomu murume anenge asiri kunatso hwa. Kana asina kondhomu ukamupomba nemasuru unotoona achidavira nokuda kwekunakigwa nazvo iye. Iwewo unohwa chombo chichigwinhagwinha mukati zvinonaka chose.
Kana oda kunoti achitunda, kana ane kondhomu unoziva hako kuti ava kuda kutunda kana kuti ari kutunda asi hapana zvaunohwa mukati. Kana asina kondhomu, unotanga nokuhwa chombo chichiita tuma SPASM tudikidiki tunnaka kuhwa. Pamwe kana une zemo nechekare zvinokwanisika kuti chomho kuhwa chichiita izvi, zvinokonzera kuti uhwe chose kuda kuita ORGASM ipapo. Kana wange uchitokwizirida bhinzi, unohwa zvotokuita sewanyikwa musoro mumvura wotobitirigwa wotoda kufa.
Kana ane kondhomu anowanza anonoka kutunda asizve FEELING yacho haisiriyo chaiyo saka kunonoka kwake ndiko hako asi zvakati siyanei.
Kana ane kondhomu paanotunda chaipo unongoona nemaitire. Kana asina kondhomu kana mange mambogara sokuti mazuva maviri musina kuisana paanotunda unokwanisa kuhwa WARM GLOW mukati achikupa urume. Havasi vese vakadzi vanohwa kutunda kwemurume uye hadzisi nguva dzese paunozvihwa asi paunozvihwa zvinonaka chose chose. Vakadzi vasingadi urume vashomanana. Kutundisa murume chinhu chinofadza chose saka kuhwa achitotunda kunofadza. Kana ane kondhomu haunatsi kuhwa.
Zvinomboitika kuti muri pakushandisa kondhomu, robvaruka. Ipapo parinobvaruka weka unohwa kuti kunaka kwacho kwasiyana chose. Haumbozodi umwe munhu kukutsanangurira kuti zvakasiyanei.
Ndichabvunzabvunza asi kana pane anoda kufanotibatsirawo tsanangurai tihwe.Kana une zvaunoziva nyora kukero inotimaichibwe@yahoo.co.uk
Kuvarume Tawanda ndiye atanga kutijekesera kwahi
"Mai Chihwe condom harinyatsoite. Paya vakadzi pamunenge muchiti varume tishandise condom rudo rwedu rwunobva rwaenda. Murume anozongorhoja hake mukadzi asi mwoyo uri kumakoto! Condom rine too much lubrication zvobva zvawedzera nelublication yemukadzi kusvedza kwacho kunodzikisa kukwesherana kwechombo nenhengo yemukadzi zvobva zvaita kuti kurhojana kubhowe! Chimwe chete chandakaona chakanakira condom kushinya kwarinoita nhengo yemurume. Inobva yanyanyomira zvakanaka! "
Hatisi kuti musashandisa ma kondhomu. Ane basa rawo guru chose. Isu takashandisa ma kondhomu nguva refu chose pandaimwisa mwana wekutanga gore rese. Wechipiri mwedzi gumi neumwe. Nokuti tange tisingadi kuti mwana amwe mukaka une mapiritsi. Kune varapi vanokupai MINI PILL kana uchimwisa mwana. Isu takangoti bodo ngatishandise ma kondhomu kusvika tarumura. Ndosaka ndichinatsa kuhwisisa kuti rinoshandiswa sei.
Kuvanhu vasina kuroorana asi vanogaroisana, munokwanisa kusarudza kushandisa ma kondhomu zvisinei kuti mukadzi ari pane imwe PROGRAM yokudzivirira mimba. Kana muchiziva kuti munogarohurirana kana kuti imimi vacho muru kutohurira vamwe vemudzimba, zviri nani mushandise ma kondhomu. Pano ndangiti nditsanangure kusiyana kwekunaka kwacho asi unongonakigwa zvakadaro. Hatisi kuti hazvinaki. Zvinonaka chose.
Ndaingozvivengera kuti pakati peusiku chero ukapepuka une zemo unomurira kusvika kwaedza nokuti ukambotungidza magetsi mukaisana, unokwanisa kuzoshaya hope. Makondhomu akanaka chose pazvinhu zvakawanda asi anoda vanhu vasingagari vese, uye chengeta akawanda muHANDBAG rako nokuti pamwe mukatanga kuisana munokwanisa kuisana katatu pamaawa maviri.
Source - maichibwe.blogspot.com